खुला ज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल - विकिपिडिया
खुला ज्ञान प्रतिस्ठान नेपाल Open Knowledge Foundation (OKFN) ओकेएफएन २००४मा स्थापित गैर नाफामुलक संस्था हो । विशेष गरी खुला ज्ञानको प्रबधनका निम्ति सामग्री, परियोजना तथा समुदाय निर्माणमा समर्पित हुन यसको सुरुवात गरिएको हो । यो यस क्षेत्रकोलागि राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय स्तरको नेतृत्वकारी संस्था हो ।
नेपाल अध्याय को स्थापना फेब्रुरी २०१३मा भएको हो ।
२ के हो यो खुला ज्ञान ??
३ कसरी सम्लग्न हुने
खुला ज्ञानको विचरलाई प्रवर्धन गर्ने, यो के हो र यो किन राम्रो बिचर हो।
खुला ज्ञानको कर्यक्रम् सचालन गर्ने, जस्तै खुला ज्ञान सम्मेलन ।
खुला ज्ञानको परियोजनामा काम गर्ने, जस्तै खुला अर्थतन्त्र ।
खुला ज्ञानको परियोजना, समुदाय र श्रोतकोलागि पुर्वधार र सम्भाव्यतापूर्वक एउटा घर उपलब्ध गर्ने ।
खुला ज्ञान विषयहरूमा युके, युरोपियन र अन्तरास्त्रिय तहहरूमा काम गर्ने ।
के हो यो खुला ज्ञान ??[सम्पादन गर्ने]
कुनै पनि समग्री - डाटा, विषय बस्तु अथवा जानकारी सङ्ग्रह, सबैले स्वतन्त्र रूपमा बिना प्रतिरोध प्रयोग, पुन प्रयोग र वितरण गर्न पाउनु पर्छ । यसका प्रमुख विशेषताहरु : उपलब्धता र पहुँच, पुन प्रयोग र वितरण, र विश्वव्यापी सहभागिता ।
कसरी सम्लग्न हुने[सम्पादन गर्ने]
पारदर्शिता र सहभागिताको निम्ति खुला डाटा, खुला दस्ताबेज, खुला सरकारको अपरिहार्यलाई स्विकार्नुहुने र त्यसको निम्ति खुला ज्ञानमा सहमत हुने व्यक्ति यो अभियानमा सहभागी हुन सक्छन्।
खुला ज्ञान सम्मेलन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो खुला डाटा र खुला ज्ञानको कार्यक्रम हो, जुन २००५ पछिको चल्दै आएको लगातार बार्षिक शृङ्खला हो । गत वर्ष हेल्सिन्कीमा भएको कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी शहरबाट १००० भन्दा बढी सहभागी थिए । २०१२को कार्यक्रममा वर्ल्ड वाइड वेबका आविस्कारक सर टिम बर्नर ली, गापमाइन्डर का हान्स रोज्लिन, इन्टरनेट आर्काइभक ब्रिउस्टर कह्ले र सनलाईट फाउन्डेसनक इलेन मिलेरले प्रस्तुत गरेका थिए ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=खुला_ज्ञान_प्रतिष्ठान_नेपाल&oldid=915474" बाट अनुप्रेषित
नेपालका सामाजिक संस्थाहरू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:०८, ११ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।